Nusratul Islaam Wal Muslimiin Oo Qaaday Howlgallo Loogu Aargudayo Rasuulka SCW. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Nusratul Islaam Wal Muslimiin Oo Qaaday Howlgallo Loogu Aargudayo Rasuulka SCW.
Last updated Dec 5, 2020 366 0
Mu’ssada warbaahineed al-zallaaqah ee ku hada afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam Wal muslimiin ee maqribul islaam ayaa baahisay bayaan cusub oo looga hadlayo Howlgallo Ka Dhacay waddanka maali oo lagu dilay askar Faransiis ah kuwaas loogu aargadayo Nabi Maxamed SCW.
Bayaanka ay baahisay mu’ssasada ayaa waxaa ciwaan looga dhigay illaa tansuruuhu faqad nasarahullaah, waxayna mujaahidiinta Nusratul islaam Wal muslimiin ku sheegeen in weeraro xooggan oo duqaymo ah ay ku garaaceen saddex fariisimood oo ay ciidamada Faransiisk ku lahaayeen waqooyiga Iyo bartamaha waddanka Maali.
Istiftaax Iyo fur furasho kadib waxaa bayaanka lagu yiri: annagoo oo finayna baycadii rasiilkeenna Iyo xabiibkeenna Muxamed scw, uhiilintiisa Iyo u aar gudka cirdigiisa sharafta badan, Iyo annagoo oofinayna dardaraanka umaradeenn.
Waxay Walaalihiinna mujaahidiinta Nusratul islaam Wal muslimiin fuliyeen camaliyaad dhowr ah oo loogu aar gudayo sharafka nabi muxammed SCW kuwaas oo lagu qaaday saddex fariisimood oo ay ku sugnaayeen gumaystaha Faransiiska.
Maalintii Isniinta 14 Rabiicul Aakhir 1442 hijriyada oo waafaqsaneyd 30-kii November 2020, ayay dheceen weeraradaan allaah ayaana ku mahadsan, waxaana weerardaas oo duqaymo ahaa lala beegsaday saddex fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysiga ee Faransiiska, waxayna kala yihiin:
1-Fariisinta Faransiiska duullaanka ku jooga waddanka ee magaalada keydaal ee gobalka baarkhaan waddanka Maali.
2-Saldhiga gumaystaha Faransiiska uu ku keeyahay gaauo gobalka baarkhaan ee waddanka Maali.
3-Iyo xirada millatari ee ay Faransiisku ku leeyihiin manka gobalka baarkhaan ee gudaha Maali.
Mujaahidiinta ayaa waxay bayaankooda ku sheegeen in weeraradaasi oo dhacay bishaan Aan ku guda jirno khasaarooyin lagu gaarsiiyay ciidama Faransiiska ee duullaanka ku jooga waddanka Maali.
Laba fariisin oo ay ciidamada Faransiisku ku lahaayeen magaalada keydaal ee waddanka Maali ayaa mid kamid ah goobaha marti galiyay duqaymahaan, waxayna mujaahidiinta ku garaacen madaafiic culcus, halka Kan kalana ay ka fuliyeen weerar toogasho ah kaas oo sababay dhimashada 2 Askari oo Faransiis ah.
Bayaanka ayaa waxay mujaahidiinta Nusratul islaam Wal muslimiin ku sheegeen in duqaymaha kadib la arkayay qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareertay, taas oo muujinaysa khasaaraha ka dhashay duqaymaha.
Qeybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa fariin culus loogu diray madaxweynaha Faransiiska Emanuel Mackron waxaana lagu yiri: Waxaan leennahay madaxweynaha kadsoon ee Aan caqliga lahayn, habowga Iyo kadada aad ku jirtaan Iyo ku madax adeegiinna aflagaadaynta sabiga SCW waxay muslimiinta usii siyaadin doontaa inay uhiiliyaan nabiga swc ayna arrintaas ku bixiyaan naftooda Iyo wax waliba oo ay awoodaan.
Mackron Iyo ciidankiisa Iyo dhammaan cadowga Islaamka waxaan leennahay ku bishaaraysta wax idin xumaan galiya, ayaa lagu Soo gaba gabeeyay bayaankaan kasoo kasoo baxay jamaacada nusratul islaam Wal muslimiin ee ka dagaalanta waddanka Maali.
Halkan ka dhagyaso Warbixin Bayaanka Nusratul islaam Wal Muslimiin